U-Luke Howard kanye nokuhlukaniswa kwamafu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
U-Luke Howard kanye nokuhlukaniswa kwamafu
IsiJalimane Portillo | | Amafu
Esihlokweni esandulele sibone okuhlukile izinhlobo zamafu ukuthi singahlangana esibhakabhakeni sethu. I-Meteorology yisayensi efundwe amakhulu amaningi eminyaka. Ngalesi sizathu, namuhla sibuyela emuva ngesikhathi ukuyohlangana nososayensi owaqamba igama lokuthi amafu kuqala. Ingabe mayelana ULuka Howard. Umuntu waseLondon ngokuzalwa, usokhemisi ngokomsebenzi nobuchwepheshe besimo sezulu ngokubiza, wayeyindoda eyayikhathazwa amafu kusukela ebuntwaneni.
Lapha ungafunda ngayo yonke i-biography kaLuka Howard nokuthi waqamba kanjani amafu futhi wawabiza. Ngabe ufuna ukwazi kabanzi ngomlando wemeteorology namafu?
1 Indaba kaLuka Howard
2 Izinhlobo eziyisisekelo zamafu esibhakabhakeni
3 Izinhlobo zamafu ezikhonjwe nguLuka Howard
4 Amafu namuhla
Indaba kaLuka Howard
Ngesikhathi esemncane, uLuka wayechitha amahora amaningi ngosuku esikoleni ebuka ngamafasitela emafwini. Uthando lwakhe kwakuyisibhakabhaka nesimo sezulu. Wazalwa ngo-1772 futhi, njengawo wonke umuntu ngaleso sikhathi, wayengaqondi ukuthi amafu akhiwa kanjani. Lokho amafu antanta esibhakabhakeni bekulokhu kuyimfihlakalo efanele ukuxazululwa isintu. Izinto ezinamanzi ezikhula zibe mpunga kuze kube yimvula. Abantu abaningi babenentshisekelo kumafu, kepha akekho noyedwa owayefana noLuke Howard.
Futhi ukuthi kusukela ebuntwaneni wayekujabulela ukubuka ukunyakaza kwabo futhi wanquma ukuthi amafu kufanele abe negama kuye ngokuma kwawo. Naye uqobo ukwamukele ukuthi akazange anake kangako ekilasini. Kodwa-ke, ngenhlanhla ngekusasa lesimo sezulu, le ndoda yafunda isiLatini.
Uma kuqhathaniswa nezinye isayensi, isimo sezulu siye sakhula kamuva. Lokhu kungenxa yokuthi ulwazi nobuchwepheshe obudingekayo ukuhlola nokulandela isimo sezulu nesimo sezulu kuyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. Kamuva lapho izimo zezulu zavela njengesayensi futhi ngenxa yayo sinolwazi oluningi mayelana namandla weplanethi.
Akekho ongabamba ucezu lwamafu uphinde uyihlaziye elebhu noma uthathe amasampula wothingo. Ngakho-ke, ukuqonda amafu kwakudinga indlela ehlukile kunale kaLuka Howard akwazi ukuyinika le sayensi.
Izinhlobo eziyisisekelo zamafu esibhakabhakeni
Umbono wakhe wamafu wakhula ngemuva kweminyaka yokubuka okuqhubekayo kwesibhakabhaka wagxila ngezindlela eziningana. Yize amafu ayengaba nezinhlobo eziningi kumuntu ngamunye, ekugcineni ayehambisana nephethini. Kungashiwo ukuthi bangabesisekelo sezibalo amafu afana ngazo.
Wonke amafu akhona ayengawemindeni emithathu eyinhloko uLuka Howard ayikhomba.
Owokuqala yifu le-cirrus. I-Cirrus kwakuyi-Latin ye-fiber noma izinwele. Kwakukhulunywa ngamafu aphakeme akhiwa amakristalu eqhwa akha emkhathini. Ukuma kwayo kufana negama elinikezwe lona.
Ngakolunye uhlangothi, siyathola amafu e-cumulus. NgesiLatini kusho inqwaba noma inqwaba futhi kubhekisa ukwakheka kwayo.
Ekugcineni, kwakukhona umndeni we-stratus. Kwakusho ungqimba noma ishidi.
KuWoward amafu ayelokhu eshintsha njalo. Hhayi ngesimo kuphela kepha futhi behla benyuka ngokukhuphuka, bahlangana futhi basakazeka ngomkhathi. Amafu ahamba njalo futhi kuyaqabukela kakhulu ukuthi abe nokuma nokuphakama okufanayo imizuzu eminingi ngesikhathi.
Noma yiluphi uhlobo lokuhlukaniswa kwamafu bekufanele licabangele lokhu. Ngakho-ke, ukucwaninga ngemindeni emithathu yamafu, kunezelwa izinhlobo eziphakathi nendawo nezinhlanganisela. Lokhu kwenzelwe ukufaka ushintsho olujwayelekile phakathi komndeni owodwa nomunye futhi kube nokunemba okwengeziwe kusimo sezulu.
Izinhlobo zamafu ezikhonjwe nguLuka Howard
Howard ikwazile ukukhomba izinhlobo eziyisikhombisa zamafu kanye ne-cumulonimbus. Kuyaziwa nangokuthi ifu lesiphepho elinamandla. Kulokhu kuvela inkulumo ethi "ukuba sezulwini lesikhombisa." I-cirrus ende, eyehla futhi isakazeka ibizwa nge- cirrostratus. Kusho ukuthi inezici zawo womabili amafu futhi inguquko phakathi kokunye nokunye. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwaleli fu kungasinikeza imininingwane ngezimo zezulu ezenzekile zalenza leli fu.
Ngakolunye uhlangothi, sithola neqembu lamafu e-cumulus ahlangana futhi asakazeke ndawonye. Ubize lolu hlobo lwamafu stratocumulus. Leli fu livela ezimweni ezahlukahlukene zomkhathi futhi linganikeza imininingwane ngokuhlukahluka kwesimo sezulu ngokubabheka nje.
Izinga likaHoward libe nomthelela osheshayo emhlabeni jikelele. Lapho amafu eseqanjwe futhi ahlukaniswa, ukuqonda amafu kwaba lula futhi kwacaca. Ngaphezu kwalokho, ezinye izinqubo eziningi zomkhathi zingabonakala ngenxa yezinhlobo zamafu.
Futhi kungenxa kaLuka Howard amafu chaza idayari ephelele ezulwini lokho kusivumela ukuthi siqonde amaphethini alandelwa ukujikeleza komkhathi. Namuhla uhlobo lwamafu lusasetshenziselwa ukubikezela isimo sezulu.
Kusukela lapho kwavela i-nephology. Yisayensi efunda amafu futhi iseyinto yokuzilibazisa enkulu kulabo abangabalindi besibhakabhaka.
Njengoba ubuchwepheshe nesayensi sekuthuthukile, sibheka kakhulu kuhlelo lokusebenza lwe-smartphone ukwazi isimo sezulu kunasesibhakabhakeni. Manje siyakhohlwa ukuthi isibhakabhaka sethu singasinika imininingwane eminingi ngokuthi kumele sithathe isambulela noma izibuko zelanga.
Kodwa-ke, ogogo nomkhulu bethu babengazi ukuthi ukuma kwamafu kunokubaluleka kokuqagela. Kodwa-ke, basebenzise amagama abo esihlukile esiLatini. Impela uzwile ngalesi sisho «Uboya bezulu. Uma lingani namhlanje, lizokuna kusasa ». Lesi sisho sibhekisela esibhakabhakeni esakhiwe ngamafu e-cirrocumulus. Lawa mafu esibhakabhakeni afana nendwangu yezimvu futhi akhombisa ukuthi isimo sezulu sizoshintsha cishe emahoreni ayishumi nambili. Ngalesi sizathu, kuthiwa uma lingani ngosuku olufanayo nalokhu kuvela lawa mafu, kuzothatha olunye usuku ukuthi line.
Akufanele sikhohlwe ukuthi amandla asemkhathini ahlala eshintsha nokuthi isimo sezulu esivela emafwini asithembeki ngaso sonke isikhathi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Amafu » U-Luke Howard kanye nokuhlukaniswa kwamafu